Momba anay - Changzhou Zonel Environmental Technology Co., Ltd.
Antsoy izahay: +86 18679002828
Momba ny Zonel Filtertech
Ny Zonel Enterprises dia ahitana ny Zonel Filtech sy Zonel Plastic, ny orinasa ao anatin'izany ny vahaolana filtration (Masinina sivana sy fitaovana sivana) ary vokatra indostrialy plastika (milina monofilament & extruding, sarimihetsika PVB).
Ny Zonel Filtech amin'ny maha iray amin'ireo mpanamboatra matihanina sy ambony indrindra izay manam-pahaizana manokana amin'ny R&D ny vahaolana ho an'ny fisarahana mivaingana sy ny fisarahana amin'ny rivotra ary koa ny vahaolana amin'ny alàlan'ny rivotra nanomboka tamin'ny taona 2008, ny orinasa dia manolotra ny filtration ara-toekarena indrindra nefa mahomby. vahaolana ho an'ny mpanjifanay saika amin'ny karazana indostria rehetra.
Ny orinasa miaraka amin'ny mpiasa mihoatra ny 220, miaraka amin'ny biraon'ny fitantanana, sampana R&D ara-teknika, departemantan'ny varotra, sampan-draharahan'ny famokarana, sampan-draharaha mividy, sampan-draharahan'ny fametrahana sy ny fanorenana, sampana aorian'ny varotra mba hamahana ny olana rehetra mety ho an'ny mpanjifantsika.
Ny sampan-draharaha famokarana miaraka amin'ny 5 atrikasa manokana: ahitana ny Stainless vy sivana trano atrikasa, vovoka mpanangona sy vovoka sivana cartridge atrikasa, sivana lamba sy sivana atrikasa, rivotra slide lamba atrikasa sy ranon-javatra sivana cartridge atrikasa, izay no fototry ny Zonel Filtech mba mamaha ny olana ho an'ny mpanjifa amin'ny fomba rafitra.
Ny vokatra filtration avy amin'ny Zonel Filtech dia natolotra tany amin'ny firenena 40 mahery eran'izao tontolo izao, izay be mpampiasa amin'ny indostrian'ny metallurgy, indostrian'ny angovo, indostrian'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, indostrian'ny simika, indostrian'ny trano fanorenana, indostrian'ny fingotra, indostrian'ny hazo, indostrian'ny fanodinana plastika, sakafo. & indostrian'ny zava-pisotro, indostrian'ny pharmaceutique, indostrian'ny fanodinana mekanika ary indostria manokana hafa hanampy ny mpanjifanay hamaha ny olan'izy ireo amin'ny fifantohana / fikarakarana rano maloto sy ny fifehezana ny fahalotoan'ny rivotra.
Izay fanampiana ilaina amin'ny sivana, tongasoa eto amin'ny Zonel Filtech!
Inona ny ZONEL?
Zero, ny zava-bita taloha dia lasa, hihazona ny toe-tsaina tsara indrindra hiasa amin'ny aotra isika, mianatra lalandava, mikatsaka mandrakariva, manavao hatrany.
Optimization, Optimization no tadiavintsika.
Ilaina, ny soso-kevitra ilaina ihany no atolotray ho an'ny mpanjifanay ary manolotra vahaolana ara-toekarena indrindra.
Ny fahombiazana, ny fahombiazana dia ny fomba fiasantsika, mitady vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa amin'ny fotoana fohy indrindra.
Andeha isika hijoro miaraka amin'ireo mpanjifantsika ary hieritreritra ny zava-drehetra ho azy ireo.
Raha mila fanontaniana momba ny vokatra na ny lisitry ny vidiny, azafady avelao ny mailakao ary hifandray izahay ao anatin'ny 24 ora.Inquiry
Adiresy birao:Efitrano 1903~1905 amin'ny Building 4, Baolong City Plaza, Zhonglou, Changzhou, Jiangsu, Sina
Tel & WhatsApp:+86 18679002828
Adiresy orinasa:No.19 amin'ny lalana Xi Taihu, Faritra Fampandrosoana ara-toekarena Wujin, Jiangsu, Shina.
Fanohanana ara-teknika:+86 18679002828